Xafiiska Somaliland Ee Itoobiya Muxuu Kaga Jawaabay Xildhibaankii Kulmiye Ku Afduubay Addis Ababa
Wednesday July 28, 2021 - 21:39:36 in News by G. Good
Wakiil ku xigeenka Somaliland ee dalka Itoobiya Barkhad Maxamuud Kaariye, ayaa waxba kama jiraan ku tilmamay eedaynta xildhibaan Mustafe Axmed Cabdillahi ee ahayd in xukuumada Somaliland isku dayday in ay ku afduubto gudaha dalka Itoobiya iyadoo usoo dhexmaraysa xafiiska Somaliland ee Itoobiya.
Wakiil ku xigeenka ayaa sheegay in aanay ka xafiis ahaan waxba kala socon afduubka uu ka cabanayo xildhibaan Mustafe ee uu sheegay in xukuumada Somaliland isku dayday in ay ku qafaalato Addis ababa.
"Arrinta uu sheegay xildhibaanku wax ala wax aanu ka ogayn ama aanu kala soconay ma jirto, xildhibaan kuna masoo caban, nooma iman, safaaradu meel ay ku taalo muu garan waayin, teleefonka masuuliyiinta safaarada muu garan waayin" ayuu yidhi.
"Halka uu xildhibaanku leeyahay teleefonkii ayuu naga xidhay safiir ku xigeenku waxan leeyahay arrintaasi may jirin, kumanaan muwaadiniin ah ayaa nasoo garaaca intaana waanu u jawaabna, waxan sheegaya in teleefon xildhibaanku leeyahay oo isoo galay aanu jirin, teleefoonkayguna aanu xidhnayn" ayuu hadalkiisa kudaray.
Wakiil ku xigeenka ayaa sheegay in hadii ay dacwadaasi soo gaadhi lahayd xafiiskooda ay talaabo ka qaadi lahayee dhacdada isla markaana ay maamuusi lahayeen xildhibaanka.
"Hadiiba ay arrintaasi jirto, halka uu ka leeyahay waan baxsaday, waxan idiin sheegaya in uu isagoo ka karaamo badan oo ka sharaf badan uu madaarada ka dhoofi lahaa hadii dacwadasi nasoo gaadhi lahayd, iskadaa isagoo xildhibaan ahe qofka shacabka ah ee reer Somaliland ayaa naan u ogolayn in ay xagtini gaadho" ayuu yidhi.
Xildhibaan Mustafe oo ka tirsan xisbiga Kulmiye isla markaana xalay sheegay in uu ku biiray isbahaysiga mucaaradka, ayaa ku andacooday in xukuumada Somaliland isku dayday in ay ku afduubto Addis ababa iyadoo usoo dhexmaraysa xafiiska Somaliland ee Itoobiya isla markaana isticmaalaysa sirdoonka Itoobiya.